ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: ကမ္ဘာတလွှားမှ ၂၀၁၀ လိုဂို အမျိုးမျိုး
ကိုပေါ အတွက် လက်ဆောင်ပါ။
Nice underwear design !!! Was it Ko Paw specially made for Mdm Paw? Any plan to distribute in Sg or MM market and S, M, L, XL available? Pls. tell us. I want to order in advance for my wife too :-).
ဪ... နိုင်ဂံတော်ဂျီးအပေါ် မေတ္တာတွေထားလိုက်ကြတာနော်၊ ဒါနဲ့ ပုံကြည့်ရတာ ယောက်ျားဝတ် ဟုတ်ပုံမရဘူးဗျ။ ယောက်ျားဝတ်များ ရနိုင်ရင် အားပေးလိုက်ချင်သေးတယ်ဗျာ။
ပြစ်မှုကျူးလွန်တာခြင်းအတူတူ မြန်မာတွေကို အရေးယူခဲ့တယ်.. ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့. . . ဒါပေမယ့် ကုလားကို ဘာမှ မလုပ်ဘူးဆိုရင် ကျုပ်တို့ မြန်မာမျိုးချစ်တွေက လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဖြောင့်မတ်တဲ့ စိတ်ထားခင်ဗျားတို့မှာ မရှိရင် အားပေးထောက်ခံတဲ့သူတွေ နည်းသွားလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး မပတ်သက်ဘူးဆိုတာ လက်ခံရင်.. ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေ နိုင်ငံရေးမှာ ပတ်သက်နေတာကို ဆန့်ကျင်ပေးကြပါ။ ထပ်မေးချင်ပါတယ်. . . နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဆွေမျိုးသားခြင်းတွေကို ဘယ်တော့ အနောက်ဖက်ကနေ နှင်ထုတ်ဖို့ စတင်မလဲဆိုတာ ဖြေပေးပါ။ ဒီမိုဘလော့ပိုင်ရှင်ဆိုရင်တွေလဲ . . နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းနေတဲ့ ကုလားတွေကို ဆန့်ကျင် ရှုံ့ချတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ဘယ်တော့ ရေးမလဲဆိုတာ ဖြေပေးပါ။
ကုလားရှေ့နေ သန်းတင်က “ပျှမ်းမျှအားဖြင့် မြို့နယ်ကြီးများတွင် လူဦးရေ၏ ၁၀% ခန့် ရှိနိုင်သဖြင့် မြို့နယ်အမတ်လောင်းတို့အကြား အရှုံးအနိုင်အတွက် မဲပေးနိုင်မည့် သူများဖြစ်ကြပါသည်”လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ၁၀%ဆိုတဲ့ ကုလားလူဦးရေဟာ မျက်စိမှတ်ထားလို့ မရပဲ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အရေးပါနေတယ်။ တကယ်လို့ ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အဖွဲ့တွေက နအဖနဲ့ အပေးအယူလုပ်နေတာကို မျက်ကွယ်ပြုလိုက်ရင်… နအဖဟာ နိုင်ငံရေးအရ အမြတ်ရသွားမှာပါ။ တနည်းအားဖြင့် မွတ်ဆလင်တွေကို ရွေေးကာက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေးဘက်ကို လုပ်ခိုင်းနိုင်ရင် နအဖကို ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အသင်းတွေကို တခြားမြန်မာတွေနည်းတူ ဖိအားပေး အကျပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီမိုဘက်တော်သား အမည်ခံထားတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အဖွဲ့တွေရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ သားသမီးတွေကို မြန်မာပြည်ပြန်ပို့အောင် လှုပ်ရှားသင့်တယ်။ ဒီမိုမြန်မာတွေက ခင်ဗျားတို့ ကုလားတွေအပေါ် ဘယ်လောက် ကာကွယ်ပေးခဲ့လဲဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ အဲလို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဒီမိုမြန်မာတွေရဲ့ မျက်နှာကို ထောက်ပြီး .. လုပ်သင့်တာကို လုပ်ပေးပါ။ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ တော်လှန်ရေးအပေါ် သစ္စာဖေါက်မယ်ဆိုရင် . . . . ခင်ဗျားတို့တွေကို ဒီမိုမြန်မာတွေက ဘယ်လောက် အထိ နာကျည်းမလဲဆိုတာ စဉ်းစားပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်က အချက်အလက်နဲ့ ပြောပြတာနော်… ကလေး ကုလား ပြောတာမဟုတ်ဘူး။
ကိုဇော်မျိုးကြည့်ရတာ... ကုလားတွေကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားပုံရတယ်.. အချိန်ပြည့် ကုလားကြောင်းပဲတွေးနေသလားမသိ... ရေးချင်တယ်ဆိုလည်း ကို့ဘလော့မှာကိုရေးပါဗျာ..
သူများတန်ဖိုးရှိတဲ့စာရေးနေတဲ့ဟာ.. စာဖတ်သူတွေအနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့.. မဆိုင်တဲ့ comments တွေလည်းဝင်ဝင်မရေးပါနဲ့.. ခင်ဗျားကြည့်ရတာ.. မည်းမည်းမြင်ရာဟောင်တတ်အောင် သင်ပေးခံထားရတဲ့ ခွေးကျနေတာပဲ.. ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်... ပိုစ့်မြင်သမျှဝင်ရေးတော့တာပဲ.. ဦးနှောက်မရှိတဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ comments တွေကို ရပ်တန်းကရပ်ပါတော့ဗျာ... ကိုပေါရေ... blogger မဟုတ်တော့မသိလို့ပါ.. specific user ID တွေကို.. comment post လို့မရအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားခင်ဗျာ. စာဖတ်ရတာတော်တော်လေးကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လို့ပါ..
ဟုတ်ပဗျာ၊ သူ့ဟာသူကြိုရေးထားတဲ့ format
တွေနဲ့ ဒါတွေပဲလာလာပြောနေတယ်၊ ကုလားကို
ကြည့်မရပေမဲ့ကြာတော့သူစာတွေက အပ်ကြောင်းထပ်တွေချည်းပဲ၊ ကိုရွှေအိုးဆိုသူရေးထားတာလေးကြတော့ ရူးချင်
thanks , ko paw